मानविकीमा माथापच्चिसी | परिसंवाद
डा. हेमराज काफ्ले	 मङ्लबार, जेष्ठ ७, २०७६ मा प्रकाशित
म मानविकीको शिक्षक हुँ । नेपालको एउटा विश्वविद्यालयमा भाषा, साहित्य र सञ्चारकला पढाउँछु । लगभग १९ वर्षअघि म शिक्षकको रूपमा प्रवेश गरेताका विश्वविद्यालय सानो थियो । यसमा विज्ञान, इन्जिनीयरिङ्ग र चिकित्साका विविध विषयहरूमा विशिष्टता हाँसिल गरेका मानिसहरूको भिडमा अल्पसंख्यामा रहेर काम गर्नुपर्दा मानविकी त्यसमाथि साहित्य पढेर ठूलै भूल गरिएछ जस्तो लागेको थियो । मानविकीका मानिसहरूलाई अगाडि बढ्न देशभित्रै स्थापित बाटाहरू थिएनन् । अरू विधाका सहकर्मीहरूको आवतजावत, भ्रमण, विद्वत्‌वृत्तिको अवस्थै लोभलाग्दो थियो । हुन त प्रत्येक व्यक्तिका आफ्नै गुनासो थिए, आफ्नै पिडा । हामी त गुनासो केमा गर्ने, कोसँग गर्ने भन्ने पनि थाहा पाउँदैनथ्यौँ । अर्को विश्‍वविद्यालयका समकक्षी वा अग्रजहरूसँग कुरा गर्दा भनिदिन्थे, हेल्मेट भिरेर चारतिर दगुर्नुलाई स्वर्ग ठानेको भए गलत, कम्तिमा एउटा राम्रो प्रगति गरेको विश्वविद्यालयमा छौ, त्यसबाट आफ्नो व्यापकता खोज्ने प्रयास गर ।
अहिले मेरो विश्वविद्यालय आफैँमा सानो छैन । कम्तिमा सातवटा मूल विधाका संकायहरू छन्। थुप्रै एकल तथा अन्तरविषयात्मक शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । म काम गर्ने केन्द्रीय हाता, धुलिखेलमा सानो ठाउँमा दर्जनौँ विधाका कार्यक्रम र मानिसहरू अँटाएका छन् । एकै ठाउँमा लामो समय विचरण गरेकोले होला हामी यहाँका सबैलाई आफू सानो पोखरीका ठूला माछा भएको अनुभव हुन्छ । फेरि खाँदिएर बसेर होला हाम्रो मन चाहिँ कहिल्यै ठूलो भएको छैन जस्तो लाग्छ । पोखरीमा जति ठाउँ आफ्नो भागमा छ, त्यसैमा कित्ता काट गरेर ‘म अरूभन्दा यसरी फरक छु’ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न उद्यत छौँ दिनरात । भनाइको मतलब, हामी बीचको सहकार्य र अन्तर खुट्याउने माथापच्चिसीमा अल्झेको टड्कारो आभाष हुन्छ ।
मेरो परिवेशको वास्तविकताले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्लाजस्तो त लाग्दैन । तर नेपालमा विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रबीचको पूर्वाग्रहको प्रतिनिधि झल्को चाहिँ यसले दिन्छ नै । नेपाली प्राज्ञहरूबीचको छलफल हामी किन एक अर्काका हुन वा सहकार्य गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित छ भन्नुमा अत्योक्ति नहोला ।
समाजका लागि ज्ञानी, गुनी र सिर्जनशील व्यक्तिहरू तयार गर्ने मानविकी विधाको अधोगति के समग्र मानव विकासका लागि ठीक हो? समाजलाई सिप वा प्रविधि विज्ञान वा प्रविधि केन्द्रित विषयहरूले देलान्, तर ज्ञान, चेतना वा मार्गनिर्देशन कसले गर्ने ? भट्किएका नागरिकहरूलाई सुबाटोमा कसले लगाउने? यो माथापच्चिसी यस अर्थमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ । यसमा अझ बढी कलम चल्नु आवश्यक छ ।
अहिले मानविकीका कार्यक्रमहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परिरहेको व्यापक चर्चा छ । विश्‍वविद्यालयका कार्यक्रमहरूमा सङ्कट पर्नुलाई यो विधाको मर्म मरिसेको ठानिनु हुँदैन । कुनै विधाको सान्दर्भिकता मानव समाजमा अडेको हुन्छ । मात्र मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने खाँचो छ ।
मानविकी अन्तर्गतका विधाहरूको काम छैन, सान्दर्भिकता सकियो भन्ने औपचारिक वकालत भइरहेको पनि थाहा छैन । यस्तो वकालत गर्ने मुर्ख्याइँ कसैले पनि नर्गला । बरु उपयोगितावादी भिडले खुम्च्याइ दिएका संरचनाहरू कसरी उपयोगी बनाउने भन्नेतर्फ पहल नभएको चाहिँ हो । जसरी विज्ञान-प्रविधि अन्तर्गतका विज्ञहरू आ-आफ्ना विधाको उत्थानमा हौसिएका छन्, त्यही मात्रामा मानविकीभित्रका विज्ञहरू उदासीन छन् । विज्ञहरूमा आफ्नै विरासत टिक्छ कि टिक्दैन, टिकाउने कि नटिकाउने भन्ने विषयमा वहस चलाउने आत्मविश्‍वास समेत गुमिसकेको आभाष हुन्छ । मानविकी समुदायले आफ्नै सन्ततिमा विधाको बिँडो जिम्मा लाउने सम्भावना त झन् पूरै टरेर गएको देखिन्छ ।